Esi ewepu ngwa zụrụ site na fromlọ Ahịa App | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ewepụ ngwa ndị azụrụ na Storelọ Ahịa App
Mmanya na-egbu egbu | | Aplicaciones, software
Ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ mgbe niile nke ngwaọrụ iOS, ọ bụrụ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch, anyị na-enwekarị mmasị ịnwale ngwa. Ọtụtụ n'ime ha na-adịru sekọnd ole na ole na ngwaọrụ ahụ, ma akara ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi na akụkọ nzụta anyị na Storelọ Ahịa App.
Oge ọ bụla anyị gara ngalaba Shozụ ahịa, ebe ahụ anyị ga-ahụ ngwa ndị dị jụụ anyị nwalere oge, n'agbanyeghị na a zụtara ha ọtụtụ afọ ma dị njọ, ha gaara ewepụ ha na ngwa ngwa Apple.
O di nwute na anyị enweghị ike iwepu ngwa anyị zụtara site na ndekọ Apple. Anyị nwere ike zoo naanị ngwa achọghị ka ha ghara ịpụta ọzọ na ndepụta listzụta. Nke a bụ otu esi zoo ngwa ndị achọghị ka ha ghara ịpụta na ngalaba ahụ ọzọ.
Na mbụ anyị na-echigharịkwuru Ngwa iTunes.
Anyị gbagoo Ụlọ Ahịa iTunes, nke dị n'elu aka nri nke ihuenyo ahụ.
N'aka aka nri na n'okpuru isiokwu Njikọ, anyị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ n'etiti nke bụ nhọrọ Zụtara na anyị ga-pịa ịbanye ngalaba ebe ndepụta nke ngwa niile anyị zụrụ karịa oge na Apple ID anyị gosipụtara.
Na ngalaba azụrụ, anyị na-aga Ngwa, dị n'etiti Egwu na Akwụkwọ iji gosipụta ngwa ndị anyị zụrụ. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike iyo, dabere na ụdị ngwa ahụ, ma ọ bụ maka iPhone ma ọ bụ iPad ma ọ bụrụ na ebudatara ngwa ahụ n'ọbá akwụkwọ anyị ma ọ bụ naanị na egosiri niile.
Anyị na-aga na ngwa nke anyị chọrọ izobe na pịa X nke ga - aputa na akuku aka ekpe nke ngwa. Ngwa ahụ ga-apụ n'anya na ndepụta ahụ agakwaghị egosi site na iTunes ma ọ bụ na iDevices anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi ewepụ ngwa ndị azụrụ na Storelọ Ahịa App
Na mbipute 12.1.1.4 nke iTunes, a gosipụtara strikethrough apụtaghị
zoo ngwa dị ka egosiri ebe a mana ọ ka na-egosi na ekwentị m: S.
Gịnị ma ọ bụrụ na x apụtaghị na iTunes?
Agbanyeghị na "X" apụtaghị, ọ ka nọ n'akụkụ aka ekpe elu mana n'ụzọ zoro ezo. Pịa na mpaghara ahụ ma ị ga - ahụ otu esi etinye ngwa ahụ.
X x adighi egosiputa ya
Nke a na - eme ka ọ ghara ịpụta na iTunes ọzọ, mana ọ ka gosipụtara n'okpuru "azụrụ - Ọ bụghị na iPhone a" na iPhone. Mana olee otu ọ ga - esi kwe omume na NT SOR SO ỌD AB D the MMA NA NT ABKWU likeLỌ dị ka nke ihichapụ ngwa ndị a zụrụ nke ị na-achọghịzi ma etinyeghị ya?
Ekele enyi. O mere m dịka ụfọdụ ndị dere na mbụ na m zoro ya mana (na-enweghị ịkwụsị njikọ ipod na kọmputa ahụ) a ka hụrụ ya. Mgbe m mechiri iTunes ma kwụpụ iPod, ngwa ahụ kwụsịrị igosi.
Ekele ma kelee m
Etu esi hazie ozi email Gmail ka eziga ya na ụbọchị
Otu esi ejikọ kọmputa na Dropbox na akpaghị aka